သက်ဝေ: တနေ့ တာ ဒိုင်ယာရီ
Posted by သက်ဝေ at 3:48 PM
ဇနိ August 1, 2008 at 5:39 PM
တနေ့တာကို ဒီလိုရေးတော့လည်း ဖတ်ကောင်းသား
nu-san August 1, 2008 at 10:09 PM
-အိပ်ယာက နိုးလာရင် မနက်စာက အဆင်သင့်..
- နေ့လည်ထမင်းစားချိန်ဆိုရင်လည်း စားချင်တာတွေ်စားလို့ရတယ်..
-နေ့လည်နေ့ခင်း blog လည်တာတော့ တူတယ်.. :P
-အဟဲ.. ရုံးအပြန်မှာ ညစာကို ချစ်ချစ်နဲ့ အပြင်မှာသွားစားတယ်ဆိုတော့.. အိုး..အို.. (အလုပ်ရှုတ်တာတွေ စိတ်ညစ်တာတွေ ဘေးဖယ် ထားလိုက်... ) လောကကြီးက ပျော်စရာအတိပါလား သက်ဝေရေ... :D
khin oo may August 3, 2008 at 2:25 AM
မနက် ၅၃၀ထ. အိမ်ကနေ ၆၃၀ မတိုင်ခင်ထွက်. ညနေ ရှစ်နာရီ မတိုင်ခင်ရောက်. သူက ထမင်းချက်ိထား ကိုယ် က ကြက်သားကြော်နဲ စွမ်တမ်ဟင်ရည်ဝယ်လား ည ၁၀ နာရီ သူအိပ်. ကိုယ်အိက်တော.သန်းခေါင်ကျော် အလှတွေလည်.ပျက်ြ့ပီ. အ်ိပ်ရေးမဝလို.
myatnoe August 3, 2008 at 4:18 PM
အမ.. စက်ရုပ် ဘ၀ဖြစ်နေပီနောါ်..
တခါတခါ ပြန်တွေးရင်းနဲ့ ဘာမှလဲ .. မဟုတ်ပါလား ဆိုပီး တွေးမိတယ်..
အိပ်ယာထ.. ရုံးသွား ကျောင်းသွား ထမင်းစား ည ဆို အိပ်..
သံသရာနဲ့ တခါတလေ တွေးကြည့်ဘူးတယ်..။
တန်ခူး August 4, 2008 at 8:29 PM
သက်ဝေရေ…ဒိုင်ယာရီလေးက ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ… မနက်စာအဆင်သင့်ပြင်ပေးတဲ့သူက အနားမှာ… အားကျလိုက်ပါဘိ… တို့ လဲမနက်တိုင်း class 95 FM နားထောင်တယ်… DJတွေကြိုက်လို့ … ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ဘ၀ထဲမှာပဲ ပျော်စရာလေးတွေ ကြံဖန်ရှာယူရတာပေါ့နော်…
Yu Wa Yi August 5, 2008 at 8:08 AM
သူကတော့ အိပ်တာကြာလှပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ..အလုပ်ထဲမှာ မောလာမှာကိုး။ မနက်ကျမှ စောစောပြန်ထပြီး တူတူလမ်းလျှောက်ထွက်ဖူးလား သက်ဝေရဲ့။
ကလိုစေးထူး August 8, 2008 at 5:43 AM
ဒိုင်ယာယီကို ဖတ်လိုက်တာ သက်ဝေတယောက် တော်တော့် တော်တော်လေးကို အလုပ်ရှုပ်တာပဲကိုး :D
သက်ဝေ August 14, 2008 at 1:40 PM
အားလုံး သိကုန်ကြပြီ အဟဲ...
နုစံရေ... ဟုတ်ပါတယ်။ အရာရာကို အကောင်းဖက်ကသာ တွေးကြည့်တတ်တဲ့ သက်ဝေ အတွက်တော့ (လောကကြီးနဲ့ချီပြီး မပြောသာရင်တောင်) ဘ၀က နေပျော်ပါတယ်လေ..။ ဘလော့ဂ်ထဲမှာ နေရတာကတော့ အပျော်ဆုံးပေါ့.. ယုံ။
မမခင်ဦးမေ... အလှတော့ အပျက်မခံနိုင်ပေါင်... (နဂိုကလဲ တော်တော်လေး လှရှာသကိုး) သက်ဝေကတော့ အချိန်ရရင် ရသလို အိပ်တာဘဲ..။
ညီမလေး မြတ်နိုး... သိပ်မတွေးနဲ့ ...။ ဆံပင်တွေ ဖြူကုန်မယ်။
ကျေးဇူးပါ။ သက်ဝေက အိပ်ပုတ်ဆိုတော့ သူက မနက်စာ ပြင်ရတာပေါ့လေ...။ ညစာတွေကျတော့ အပြင်မှာစား... အဲ..အဲ.. ယောင်လို့သက်ဝေကိုယ်တိုင် ချက်ပါတယ်... ယုံ။
Class 95 အကြိုက်ချင်း တူနေပြီနော်.. လူငယ်ကြိုက်ပေါ့.. ဟီး။ သူကတော့ Gold 90 FM တဲ့။ Oldies တွေ...။ မနက် ရုံးသွားတိုင်း လမ်းမှာ FM လိုင်း လုဖွင့်ရင်းလဲ သတ်ကြရသေးတယ်... ယုံ။
တစ်ခါတစ်ခါတော့ လျှောက်ဖြစ်ပါတယ်...။ Weekend တွေမှာပေါ့။ Weekdays တွေမှာတော့ ကုတင်ကို ပတ်ပြီး လျှောက်တာပေါ့လေ...။
ဟီး.. သိသွားပြီ..။ ရှက်လိုက်တာ..။ အမှန်တရားတွေရေးမိတော့...။ လာလည်တာ မှတ်ချက်ရေးသွားတာ ကျေးဇူး အထူးပါနော်။
ဇနိ August 14, 2008 at 10:51 PM
တနေ့တာလေးက ပျော်စရာကောင်းပါ့အစ်မရေ။ အနားမှာ ချစ်ချစ်လည်း ရှိ။ အားကျသဗျာ။
diLo August 16, 2008 at 11:35 PM
inaday of ma ma thetwai wife pop..
interesting.. keke.. :P
me me also wan to have such life!